Iyyii Iyya Labsi |
Home Afaan Oromoo Iyyii Iyya Labsi
Waraanni Wayyanee guyyaa hundaa Oromoota sammuu qaban adamsee ukkaamsuu, ajjeessuu fi mana hidhaati dararuu irraa darbee Uummata Oromoo nagaa dhowwachuudhaan akka goolaa jiru gabaasaa Qeerroo irraa hubachaa jirra. Keessattuu hammeenyi bartootaa Oromoo irra gahaa jiruu dhaga’uun garaa nama hammeessa. Warri ukkamaman yaroo dhumasana akka ajjefaman mamii qabaachuu hin qabnu. Qoteebulaa, hojjetaa, barataa fi artistiin Oromoo uukkaman duba kan quba itti qabutu jira. Qubni sun cituu malee fala biraa hin qabu.
Qeerroon nagaa eegduu TPLF tokko shan diigee of ijaaree warra quba ilamaan Oromoo itti qabanii ficcisisaa jiran kana hubachuu ni dadhaba jedhee hin yaadu. Warra garaa malee sammuu hin qabnee kanaan ilmaan Oromoo dhumuu fi biyyi Oromoo saamamuun fudhatama hin qabu. Tooftaan TPLF inni duraa Oromoota qara tahan fixxuu dha. Warri qara tahan yoo dhuman isa hafe gowwosaniis tahe dorsiisudhaan hin bitna abdii jedhuu qabu. Kunis kan madduu tuffii fi oftulummaa Wayyaannee irraa akkeeka ka’e akka tahe ifa jira. Akka amma deemaa jiru kanatti yoo qabsoon kun kan itti fufu tahe humni injifachuuf deemu gara kamitti akka madaalaa deemu hubachuun rakkisaa miti.
Amma ammatti dargagoonnii Oromoo aarsaa gaahaa isaanii ol baasanii jiru. Har’as guyyaa guyyaan baasuun itti fufaa jiru. Akka hubannaa koo yoo tahe amma illee Qeerroo Bilisummaa Oromoo hojiin manaa guddaan eegachaa jira. Haawasni Oromoo duchaatti qabsoo kana keessaa qooda fudhachuun barbaachisaa dha. Tarkanfiin uummata bal’aa karaa qindaa’een yoo qabsoo kana irraa qooda fudhachuu oole bartoota Oromootu hubamaa deema.Yoo Gadaan kun Uummata Oromoo bilisa hin baafne Gadaa kana fakkaatu dhalachuuf jaarraa hedduu eeguun ni mala. Gadaan kuniif Gaadaan Jaarraa kudha jahaffaa wal fakkaata jedhama. Bara Gaddaa Jarraa kudha jahaffaa ti kan uummtni Oromoo Gaanfa Afrikaa irraa diriire. Yaadni koo akka biyya bal’ifannuu yaaduuf utuu hin taanee yaaddoon koo akka Gadaan amma jiru kun hin gufane waan dandeenyu maraa gochuu qabnaa dha.
Yaroo tokko tokkoo waan gaafannu abjuu natti taha. Kan Uummata Oromoo ajjeesaa jiru kan aangoo of harkaa qabu mootummaa TPLF. Silaa yoo seerri dabee fi cabee kan qajeelchuu fi hojii irraa olshu Mootummaa biyya bitaa jiru. Yoo mootummaan seera mataa isaa cabsee nama kan ajjeessu tahe seera eenyyuu irratti gaafatama? Warri Oromoo ajjeessan seera fi heera uummata Oromoo irraatti gaaffatamuun gaaffii hin qabu. Kana booda yaroo ilmaan Orommoo ukkaamaman, hidhaman, reebamanii fi ajjeefaman calummaa jennee ilaaluun gahaa miti. Dur yaroo ijoollumaa koo abbaa koo wajjin adamoo deemeera. Bineessi yaroo ka’u maqaa bineesichaa dhahanii kalattii inni itti qajeele warra duraa, warra boodaa warra gadii fi warra olii jedhanii salphaatti walii hubachiisan. Gara itti qajeeleen adamsituun qophaa’ee eegata. Silaa kan adamsamuu fi goolamuu qabu Wayyaanee fi kittillaayyoota ishee tahuu qabu. Kan biyya abbaa qabu keessa dhufee bashananuu fi fandalalu isaani.
Maaliif isaan uummata keenya goolu? Yaroo Wayyeenee fi gaadiduu ishee agarru dhuftee jennee maaliif iyya labsii hin dabrsinu? Yaroo iyyi labsii ku’u iyya dabrsaa waan qabnuun: inni qawwee qabu qawween, inni eebboo qabu eeboon, inni mancaa qabu mancaan, inni qotoo qabu qotton, inni haaduu qabu haaduun, inni shimala qabu shimalaan waliif dirmachuu dirqama hawaasaa godhachuu qabna. Waraana Wayyaanee shan yoo Oromoon kumni shatamni itti marse dhaabbbatee kan loltu hin fakkaataa? Yoo lola filatees waan qabnuun of irratti haleeluu dha. Uummatni Oromoo waan nagaan qabsaa’uu filateef qabsoon kun nagaan bakka yaadame gaha jennee eeguu hin qabnu. Uummata Oromoof nageenyi tokko illee hin jiru. Kan du’u, kan uukkaamamu, kan hidhamuu fi kan biyyaa ariihatamuu Oromoota. Seerrii biyyoolesa hiree ofii ofiin murteefachuu fi humna halagaa of irraa ittisuu ni eeyama. Waan uummatni keenya seera biyyoolesaa irra jallate tokko illee hin jiru. Yoo humna qabaanne malee nagaan qabsoo bilisummaa gochaa jirtu jedhee humni nu gargaaru yookan nu wajjin dhaabbatu hin jiru. Yoo nagaan qabsoo gochuun nu gargaara tahe inni amma yoona dhiigni ilmaan Oromoo akka bishaanii itti lola’e ni gaha.
Tooftaa qabsoof godhamu keessatti mana barumsaa cufuun humni dargagoo gargar tamsaasuu ni danda’a taha. Manni barumsaa bakka itti wal gahanii daandii qabsoo kana haala qinda’een gageessan tahuuf waan filmaata tahu fakkaata. Qabsoon hadhaa’aan godhamuu qabu keessa tokko Uummatni Oromoo Mootuummaa TPLF dhibaa fi dhibatti ooduu qaba. Waa irraa bituu fi itti gurguruu lagachuun filmaata hin qabua. Karaa kaminuu qaraxa baasuuf hin qabu. Xaa’oo irraa bituu fi gatii irra jiru deebisuu diduu dha. Wal quunnamtiin Wayyaanee fi uummata Oromoo jidduu jiru ifatti cituu qaba.
Mee waa’ee iyya labsii xiqqoo ibsuun yaala. Dur yaroo ijjoollumaa koo guyyaa tahe halkaan yaroo balaan dhalatu “iyyii iyya labsi isa hin dhageenyeef dabarsi”jedhee iyyi bakka rakkinni argme irraa ka’e biyya hunda wal gaha. Yoo hattuun horii fudhatee jiraate biyyi meeshaa qabu qabatee ulaa hundaa cufa. Hattuun horii gototuu dhiisee caccabee hallayyaa seenuudhaan lubbuu isaa baafata. Yoo ibdatu ka’ee jiraate biyyi walitti dirmachuudhaan balaa ibdaa guddaa irra wal oolcha. Iyya labsi waliif dabrsuun aadaa Oromoo keessatti waamcha gamtaan hattattamaan waliif dirmatee (solidarity) gaaga’ama guddaa irraa wal olshuuf dhaamsa darbu dha. Namni iyya kana dhaga’e iyya dabrsuu fi dirmachuuf dirqama qaba. Dubartii, dhiiraa, guddaa fi xiqqaan bakka jiru hunda irraa waliif dirmachuun jireenya gamtaa sabaa keessatti bakka olaanaa qaba. Humnii fi jabinnii uummata Oromoo inni guddaan aadaa isaa badhaadhaa kana keessaa kaayyoo fi akeeka maddu fudhatanii ittiin qabsaa’uu dha.
Previous articleIBSA EJJENNOO MISEENSOOTA ABO KONYAA ARIZONA
Next articleUK: The Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) advise against all travel